Maitiro ekugadzirisa saiti yeblog yedu. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 6 ​​| Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekugadzirisa saiti yeblog yedu. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 6
Kuenderera mberi ne dzino ezvinyorwa zvekuti ndakafamba sei kubva paWordPress kuenda kuna Jekyll, Yasvika nguva yekusiya dzidziso kumashure uye woenderera kunodzidzira.
Ndiri kutsanangura matanho ekumisikidza mupfungwa yekuti ndakazviita. Yekutanga faira yekugadzirisa is config.yml. Mune izvi tinowana iyo yekumisikidza yekugadziriswa kwenzvimbo. Imwe neimwe posvo kana peji inogona kupihwa akasiyana magadziriso. Asi, kana tikasadaro, iyo yakasimbiswa mufaira ino ichagovaniswa.
Rangarira kuti muchinyorwa chakapfuura isu takange todhaunirodha theme uye isu tiri kuzvimisikidza payo iko kugadzira kwedu saiti.
Kuwedzera kwe .yml kunoratidza kuti gwaro rakanyorwa uchishandisa YAML. Uyu mutauro unobvumidza madanho pakati pedata kuti asimiswe nenzira inonzwisisika kumakomputa nevanhu. Jekyll anoishandisa kupa kuenderana kune akasiyana zvikamu zvejekiti.
1 Maitiro ekugadzirisa saiti uchishandisa YAML
2 Config.yml mune Zvishoma zvikanganiso
Maitiro ekugadzirisa saiti uchishandisa YAML
Yekutanga chirongwa cheJekyll chine config.yml faira inotibvumidza kutsanangura mamwe ma parameter.
Iyi parameter inomiririrwa mune fomati
Chikamu: "zvemukati" Zvakakodzera kutaura kuti inotungamirwa nechiratidzo # haina hanya, saka kana tichida kuti Jekyll ashandise paramende iyi tinofanirwa kuibvisa.
Mune yedu config.yml faira tichaona chimwe chinhu chakadai.
title: Nzvimbo yewebhusaiti
email: Iyo saiti email
description: Tsananguro yechinhu chesaiti cheinjini dzekutsvaga kuratidza
baseurl: Kana iyo blog iri chikamu cheimwe saiti uye yakatarwa dhairekitori yakapihwa kwairi, zvinoratidzwa pano
url: Iyo yekutanga dura resaiti.
Kune mamwewo maviri mapoka.
Aya ma parameter maviri anoratidza zvinongedzo ku Twitter uye Github mushandisi maakaunzi.
Pazasi iwe unotaurira Jekyll kuti ndeipi theme yekushandisa uye ndeapi ekuwedzera-ons.
Config.yml mune Zvishoma zvikanganiso
Nisu tiri kuzoshandisa theme ine dzakawanda zvimwe sarudzo uye, nekudaro, inoda yakazara yakazara config.yml. Inonyanya kushanda kutevedzera the file kubva kune theme theme uye unamate mune yedu panzvimbo yezviri mukati mayo. Kana izvi zvaitwa isu tinogadzirisa zvinotevera parameter
Rangarira kuti yedu muenzaniso purojekiti yaive yekurima blog.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kumisikidza dingindira. Mutsara uyu
# theme : "minimal-mistakes-jekyll»Isu tinodzima chiratidzo cheiyo nhamba" # "
Iyi tema inopa akasiyana akasiyana. Ini ndinoda kushevedzwa Aqua. Isu tinotaura nezve "default" nekuisa iyo #d chiratidzo pamberi pezita uye kusagadzikana "aqua
Nzvimbo inoratidza mutauro wewebhusaiti mumhando yemutauro_VARIANT. Semuenzaniso, sezvo ndiri muArgentina ndizvo
Unogona kuwana runyorwa rwemitauro mu peji ino
Isu tinoratidza zita resaiti
Isu tinosarudza chakaparadzanisa pakati pemusoro wesaiti neiyo yepositi kuitira kuti iratidzwe nenzira kwayo mumainjini ekutsvaga.
Tinogona kuwedzera musoro wenyaya
Isu tinoratidza zita remunhu anotarisira saiti
Isu tinopedzisa iyo saiti tsananguro kuratidza mumainjini ekutsvaga uye pane peji reimba
Aya maviri ma parameter anotevera vanozivana vaviri vekare, asi vachiteerana.
EMuchiitiko chekutanga tinoratidza dura resaiti
Ngatiti blog yedu yaive chikamu chechitoro chembeu. Tinogona kuda kuigovera yayo yakajairwa kero kubva kubindu ruva / blog.
Nechimwe chikonzero, zvinyorwa zvine mifananidzo zvine kushanya kwakawanda kupfuura izvo zvisina. Kana iwe usina kuvapa imwe, unogona kuiita kuti iratidze imwe nekumisikidza nekumisa iyi paramende.
Kuti ndidzivise kuvhiringidzika, ndiri kuenda kuzochengeta iyo yekutanga ficha ficha yemusoro wenyaya. Naizvozvo, mune yedu folda folda tinofanirwa kugadzira dhairekita inonzi midziyo, mukati mayo inonzi mifananidzo, uye mukati mayo 500 × 300 pixel inonzi 500 × 300.png
Tinogona zvakare kusarudza logo yesaiti. Isu tinodzokorora maitiro ekuigadzira uye nekuichengeta mune iwo mamwe maforodha uye kupedzisa paramende:
Tinogona kusarudza zita rakasiyana pane saiti kuti iratidzwe kumusoro browser
Munyaya inotevera ticharamba tichiongorora sarudzo dzekugadzirisa. Asi, ini ndinotora iwo mukana kujekesa kuti ini handina zano nezve gadheni. Naizvozvo ini handisi ane chekuita nezvinotaurwa nemuenzaniso blog.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekugadzirisa saiti yeblog yedu. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 6
Manjaro anozopedzisira ashandisa GNOME 40 kubva v21.1 yeiyo inoshanda sisitimu
Maumbirwo eprojekti. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 5